Prosekatel ngoba kwakwakhe ukuphrofayela: izinhlobo kanye nezinzuzo
Prosekatel yokuxhuma amaphrofayli - iyithuluzi ukuthi isetshenziselwa kuyashesha futhi kulula obandayo Uhlaka amaphrofayli metal lashukumisa. Sebenzisa le Prosekatel for kokuphothula okwakhiwa ngalo la mabhodi izindonga, sivuselela kwezakhiwo zokuhlala kanye okungezona zokuhlala, kanye womshini okwakhiwa ngalo la mabhodi ngodonga. Omunye izici ezibaluleke kakhulu yalolu sensimbi kukhwalithi ephezulu yoxhumano, ngoba ngemva kudivayisi kokungathembeki phezu airfoil akuyona nhlobo nezakhamuzi kanye deformations. Ukusetshenziswa apharathasi ezifana Prosekatel yokuxhuma amaphrofayli, ivumela ukuba kakhulu lula inqubo inhlangano yabantwana bakwa-izakhiwo ifreyimu iphrofayli ngibenze kwenezele njengoba ephephile futhi iqine.
Izinhlobonhlobo yila mathuluzi
Naphezu kweqiniso lokuthi lesi sici singenziwa ngezinto ezahlukene futhi ube bobunjwa labehlukene, ikhwalithi umsebenzi kuba njalo ezingeni eliphezulu kakhulu. Manje kukhona izinhlobo ezingu 3 main yalezi amadivaysi:
Prosekatel okunjalo yokuxhuma amaphrofayli kuvamile kakhulu emakethe. Inzuzo yayo eyinhloko ukuthi unekhono ingasetshenziswa cishe zonke izinhlobo metal izakhiwo, okusho ukuthi ehilelekile yimuphi uhlobo ukulungisa noma ukwakhiwa, lapho kudingeka ukuxhuma design iphrofayli zibe munye. Prosekatel ekhiqizwa eseshukumisa amaphrofayli uxhumano ingxubevange metal okuhlala, iqinisekisa ukusebenza kwayo okwakuzothatha isikhathi eside futhi uzinzile. Esinye isici okufana ukuthi kungenzeka esikhundleni ahlabayo ingxenye (lumane kungabi okuphakade futhi angisoze ngasephula). Ngakho, lolu hlobo idivayisi iyona ukonga kakhulu ngoba kuyinto esebenza ukuyisebenzisa.
Kusebenza compounds esinjalo Prosekatel amaphrofayli nensimbi ozimele, ezimweni lapho kudingekile ukunikeza okunokwethenjelwa ngempela uxhumano izingxenye. ithuluzi esandleni has izingalo ezimbili nje umklamo walo, okufaneleyo ukuze ulale ngesandla esisodwa. Izinzuzo main yalezi Prosekatel kuyinto ukusebenza kwabo, lula ukusetshenziswa kanye nokuqina, ngoba Yenziwe izinga okusezingeni ingxubevange steel, futhi. Nokho, isetshenziswa ngasizathu simbe, ipulazi esingaphansi inkambo evamile sokuprakthiza.
Prosekatel Professional amaphrofayli yokuxhuma
ithuluzi Professional ezinezici likhulu futhi umthamo omkhulu umsebenzi owawenziwa. It isetshenziswa ngokuyinhloko for ukwakhiwa sites ezinkulu, lapho kudingeka ukuba afeze ukuxhumana phakathi amashumi namakhulu izakhiwo ezikhethekile. Kukhona indlela enjalo emashumini izikhathi eqolo ngaphezu kwanoma ngesandla futhi wasisekela, Ngakho-ke futhi ayisebenzise ngezinhloso mndeni nje ongenangqondo.
Kungakanani Prosekatel iwukuba amaphrofayli uxhumano?
Intengo yalezi amathuluzi emakethe Russian esiqhutshwa esifundeni 600 kuya ku-1 ayizinkulungwane ruble.
Lokungeniswa Cooker: amandla, amandla ukusetshenziswa kanye nezici
Kanjani ukwakha umshini ukuze efekethisiwe ngezandla zakho: izici inqubo
Ithebula Milling - ukukhiqiza bebodwa
Izibani Inamandla LED
Indlela ukukhetha yensimbi?
Umshini wokuwasha awuphenduki: Izimbangela Nezingozi Izixazululo Fault
Yini Bheka e-Austria?
Kunezinganekwane eziningi ngokuphathelene ngosizo lokuqala engalimaza wena
Ezemfundo njengoba isikhungo komphakathi, imisebenzi inkampani
Intsha Kunzima: ubani okufanele asolwe.
Tseytlina ulyana: Biography kanye nempilo yakho
Usiko ngekhulu le-19
Alexander Panzhinsky - Biography, empilweni kanye nezemidlalo career ye skier
Ukuvala umshini wokuphendula ku-Megafon: ukuphathwa kwe-Mail Mail service
Izimangalo zenziwe kanjani?
Isofthiwe: izici eziyisisekelo, ukusetshenziswa
Ucwaningo olwenziwa e-enokwehla